सरकारी निकायबाट पेट्रोल डिजेल भीख माग्न लाज मानौँ ! | ebaglung.com
सरकारी निकायबाट पेट्रोल डिजेल भीख माग्न लाज मानौँ !
२०७५ भाद्र ८, शुक्रबार १३:०६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार, विविध
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७५ भदौ ८ । देशका केहि पत्रकारहरु सरकारी कार्यालयबाट सहयोगका नाममा पेट्रोलियम पदार्थको भीख माग्दै घुम्न जाने र सेल्फी खिचेर फेसबुकमा राख्दै तमासा देखाउने गरेको सायद धेरैले देख्नु भएकै छ होला ।
पत्रकारिता सम्मानित पेशा हो । सरकारी तथा जुन कुनै संस्था र ब्यक्तिलाई दोहन गर्ने विरुद्ध कलम चलाउने पेशा हो । तर उसैले त्यसरी दोहन गर्छ भने त्यो पेशाका नामधारी त्यो कलंकित पात्र हो । पत्रकारले बैधानिक रुपमा पाउने सुचना (विज्ञापन ) वाहेकमा लालच देखाउनु र लिनुलाई अव घुस मागे विरुद्धको कार्वाही गरिनु पर्छ । कि त्यसले म दरिद्र हुँ भनेर भिख मागेको हुँ भनेर भन्नु पर्छ ।
निश्चित रुपमा कुनै पनि संघ संस्था वा राजनैतिक दलको संगठनहरुले कुनै ठुलो कार्र्यक्रम गर्दा रसिद सहित चन्दा माग्ने गरेको परम्परा अझै छ । त्यस्ता कार्यक्रममा सहयोग आदन प्रदान स्वभाविक मानिन्छ । तर ब्यक्तिगत रुपमा फोन गरेर वा भेटेर सहयोग माग्दै, नगद भएन भने सरकारी कार्यालयबाट ईन्धन पेट्रोल डिजल (पेट्रोलियम पदार्थ)को कुपन कटाउँदै लिदै गर्दा कैयौ सरकारी कार्यालयको खर्च बढेको छ ।
हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार पत्रकारितामा कतिपय बरिष्ठ भनाउँदाहरु तर कलम भने कम चलाउँदाहरु यस्तो कार्यमा बढी संग्लग्न छन । सरकारी कार्यालयमा काटिएका तेलका कुपनहरु बारे छानविन होस् । हरेक जिल्लाका पत्रकार महासंघहरुको गतिविधी बारे पनि निगरानी होस् । पत्रकार महासंघको केन्द्रले खै हेरे को ?
कुनै उद्घाटन वा कुनै कार्यक्रमको प्रमुख अतिथीको खादा ओढ्ने निम्ताए मात्रै आउने अघि पछि वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण जिल्लाका महासंघका केहि सीमित पदाधिकारीहरुले निरुङकुशता लादेका छन । नयाँ साथीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो निरुत्साहित गर्ने, कसरी त्यसलाई गिराउने र दवावमा राख्ने गरेको गुनासो छ ।
अनियमित्ता भ्रष्टाचार विरुद्ध लेख्नेहरुलाई कसरी तह लगाउने भनेर अनेक षडयन्त्रहरु गर्ने गरेका गुनासाहरु पनि आएका छन । आर्मी प्रहरीहरुको ब्यारेकमा जाँड पार्टीमा बस्ने, सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको निमन्त्रणमा जानेहरुले नै निर्भिक भएर लेख्ने पत्रकारहरुलाई भन्ने गरेका छन फलानो त एक बोत्तल रक्सीमा बिक्ने मान्छे हो ।
भन्नुस त खास बिकेको को हो ? जुन चाँही सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुसंग टाँसिएर बस्छ, सधै जाँड खाएर बस्छ उसले कहिल्लै ती कार्यालयहरुका अनियमित्ता भ्रष्टचारहरु विरुद्ध लेख्ला ? महासघका नाममा पत्रकारहरुको ठेक्का लिने तपाई को हो ? पत्रकारहरु आफैमा स्वतन्त्र छन त्यसो हुँदाहुदै पनि आचारसंहिताका विषयमा भने लगाम लगाउनुस ।
जथाभावी लेख्ने छुट पनि कसैलाई छैन । एउटा जिल्लामा एउटा गाईजात्र सुनिएको छ । जुन सुकै औपचारिक कार्यक्रममा एउटा संस्थाको प्रतिनिधीत्व एक जना ब्यक्तिले मात्रै गर्दछ । तर सुनिएको छ त्यहाँ पुगेको अध्यक्ष देखि कार्य समितिको सदस्य सम्मलाई अतिथीका रुपमा आशन ग्रहण गराउन लगाईन्छ । जहाँ आफैले बनाएको सदस्य भन्दा प्रेस युनियन , तत्कालीन प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरको नेतालाई तल पारिन्छ । यो कहाँको शासन ? त्यस्ता निरङकुशहरुको दवावमा बस्नु भन्दा कृपया नयाँ साथीहरु ठाउँ छाडौं वा संघर्ष गरौं ।
महासंघमा नभएका अन्य राजनैतिक दलमा आस्था राख्ने साथीहरुको सम्वोधन पनि गर्न नपर्ने । कार्यक्रमहरुमा प्रतिनिधीत्व गराउँदा पत्रकारका संगठनहरुलाई आफु एक्लैले कुर्लुम्मै खाने । संगठनहरुको अस्तित्व नामेट पार्ने । पुर्व अध्यक्षहरुको पाला सम्म संगठनहरुको अस्तित्वलाई जिवित राखिएको थियो ।
अहिले आफै जन्मेको संगठनलाई समेत अस्तित्वविहीन पारिएको छ । महासंघको अध्यक्ष भएँ भन्दैमा अरुको अस्तित्व समाप्त पार्नेहरुलाई सायद उसको पार्टीले पनि छाड्दैन होला र सहकर्मीहरुले पनि धेरै दिन सहेर नबस्लान । सवै औपचारिक कार्यक्रममा आफैले मात्र प्रतिनिधत्व गर्ने । यस्तो त पुर्व अध्यक्षहरुको पालामा देखिएन भन्छन साथीहरु ।
अतिका विरुद्ध अर्कोले पनि अति गर्छ नै । विभिन्न कार्यक्रमका नाममा उठाईएको तेलको विवरण पत्रकार महासंघमा हुनु पर्ने कि नपर्ने ? प्राप्त जानकारी अनुसार तपाई कै घुमुवा मध्येका एक जनाले एउटा संस्थाबाट नोटको विटो बोकेर राख्नु भएको छ । त्यो रकम र अरु मित्रहरुले उठाएको रकमको विवरण अब चाहियो हजुर ।
अर्को कुरा सम्पादक मण्डलमा बस्नेहरुले पनि समाचार सम्प्रेषण गर्ने विषयमा विभेद नगरौं । पुरस्कार वितरण लेख्नेहरुलाई दिनेकी राजनैतिक दलको कोटा र अनुहार हेरेर दिने ? यो पनि ख्याल गरौं ।
आम सर्वसाधरण त्यसमा पनि कुल्लीहरु बस्ने होटलमा बस्छन । त्यो स्वाभिमानी हो । फेरी पनि दोहराईन्छ जसले आफुलाई राजा महाराज ठान्छ त्यो पत्रकारिता क्षेत्रको कलंक नै हो । यस्तो राज, जग्गा लगायतको ठेक्का पट्टावालाहरुबाट चलेको छ भन्ने बुझिन आएको छ । नेता बन्ने नै हो भने उतै ठेक्का पट्टा तिर कै नेतृत्व सम्हाल्नुस । रिसानी माफ होला पत्रकारका विरुद्ध पनि कलम चलाउनै पर्ने भएकाले चलाईको हो ।
पत्रकार विनोद त्रिपाठी सौर्य दैनिकको सम्पादकमा नियुक्त !